Ọnwa nke afọ na French - UniProyecta
Taa n'isiokwu a, anyị ga -akuziri gị otu esi ekwu okwu ọnwa nke afọ na FrenchAnyị ga -agwakwa gị otu esi ekwu ụbọchị na oge dị adị, n'ikpeazụ anyị ga -agwakwa gị obere ndụmọdụ iji mụta French ngwa ngwa na ngwa ngwa. N'atụghị anya n'ihu ka anyị gaa nkuzi.
1 Ụbọchị nke izu na French
2 Ọnwa nke afọ na French
3 Oge na French
4 Kedu ka ị si ekwu isi okwu na French?
Ụbọchị nke izu na French
Dịka ị maara, ụbọchị izu, ma ọ bụ n'asụsụ gị ma ọ bụ n'asụsụ ọzọ, ka a na -eji kwa ụbọchị akpọ ụbọchị ị ga -arụ ọrụ, mgbe ị nwere ntule, mgbe ị nwere nhọpụta dọkịta na ihe ndị ọzọ. Dịka ị ga -ahụ, ọ dị ezigbo mkpa ịmara, ọ bụ ya mere taa anyị ga -egosi gị otu esi ekwu ụbọchị izu na French.
Mọnde ———-> Mọnde
Mardi ———-> Tuzde
Mercredi ———-> Wenezde
Jeudi ———-> Tọsde
Vendredi ———-> Fraịde
Samedi ———-> Satọde
Dimanche ———-> Sọnde
Dịka ị ga -ahụ, ọ nweghị ọtụtụ mgbanwe na okwu ọbụlagodi ma e jiri ya tụnyere Spanish, yabụ ọ ga -adịrị gị mfe iburu n'isi na ịmụ ha.
Tụnyere ụbọchị nke izu, ọnwa nke afọ na French na -esiri gị ike ịmụta mana ọ gaghị ekwe omume, mgbe ọ dị gị ka ịme ya ị nwere ike, yabụ gee ntị wee megharịa ya ugboro ugboro ruo mgbe ị nwetara ọnwa iri na abụọ nke afọ. ike.
Janvier ———-> Jenụwarị
Février ————-> Febụwarị
Mars ———-> Mach
Avril ———-> Eprel
Mai ———-> Mee
Juin ———-> June
Juillet ———-> Julaị
Août ———-> Ọgọstụ
Ọktoba ———-> Ọktoba
Nọvemba ———-> Nọvemba
Disemba ———-> Disemba
Dị ka ị chọpụtala, ọnwa ole na ole na -agbanwe mkpụrụedemede ụfọdụ na ndị ọzọ a na -agbanwe okwu kpamkpam, dịka Jenụwarị, Ọgọst na Febụwarị. Maka ọtụtụ ndị na -amụ ma ọ bụ na -amụ ọnwa nke afọ na French, ọnwa atọ a kpọtụrụ aha na -adịkarị mgbagwoju anya, yabụ ọ bụrụ na ịnweghị ike ịmụta ma ọ bụ iburu ya n'isi, echegbula n'ihi na ọ bụ ihe nkịtị.
Oge na French
Oge a dị ezigbo mkpa, n'ihi na ha na -agbanwe uwe anyị ma ọ bụ mgbe ụfọdụ na -eme ka anyị daa ọrịa n'ihi mgbanwe mberede ha na okpomọkụ. A na -ekwu okwu ndị a dị ka ndị a:
Automme ———-> Mgbụsị akwụkwọ
Hiver ———-> Oge oyi
Printemps ———-> Oge opupu ihe ubi
Té ———->> Oge ọkọchị
Oge ndị a na -esonye na nkwalite, dị ka:
Kedu ka ị si ekwu isi okwu na French?
Na -esote anyị ga -egosi gị ebe a ka esi ekwu isi ihe, nke mbụ anyị ga -agwa gị okwu ahụ n'asụsụ French, ọzọkwa n'asụsụ Spanish.
Ugbu a ị marala ihe niile, anyị ga -egosi gị ụfọdụ ahịrịokwu ka ị nwee ike lelee ihe ị mụtara:
C'est dimanche, aujourd'hui —————-> Taa bụ Sọnde
Kedu ihe ị ga-eme taa? —————->> Kedu ụbọchị taa?
C'est lundi, aujourd'hui ——————-> Taa bụ Mọnde
Nke a bụ octobre, aujourd'hui —————-> Taa bụ Ọktoba XNUMX
C'est le premier janvier, aujourd'hui —————-> Taa bụ Jenụwarị mbụ
Iji mechie edemede a raara nye ọnwa nke afọ na French, anyị chọrọ ịgwa gị ụfọdụ ndụmọdụ ga -enyere gị aka nke ukwuu ịmụta asụsụ ahụ e kwuru okwu ya.
Dị ka nkwalite mbụ, ọ dị mma ka gị na onye bi ma ọ bụ onye bi na France ma ọ bụ obodo ọzọ nwere otu asụsụ nwee mkparịta ụka. Atụla egwu imehie ihe ma ọ bụ ihere n'ihi na ị na -amụta ọtụtụ ihe site na mmejọ. Ọ bụrụ na ịmee, ị ga -ahụ ka ị na -eji nwayọ na -akawanye mma, ị ga -enwekwa mmejọ ole na ole. Ka oge na -aga, ị ga -achọpụta na French gị emezila ma ugbu a ị ga -enwe ike ikwu ya nke ọma na enweghị mbepụ.
N'ikpeazụ, anyị na -adụ gị ọdụ ka ị mụta okwu na ahịrịokwu nwere ike baara gị uru, ihe anyị chọrọ ịgwa gị bụ na ị naghị amụta ọdịnaya n'ime ahịrịokwu ndị ị na -agaghị eji ruo oge ụfọdụ.
N'ụzọ dị otu a, ọ ga -adị ngwa ịmụ ihe, ị ga -echekwa oge, ị ga -enwekwa mkpali n'ihi na ihe ị mụtara ị nwere ike mara nke ọma, ha ga -emekwa ka ị nwekwuo njikere ịga n'ihu n'asụsụ a dị ebube.
Nke a bụ maka ugbu a, anyị nwere olile anya na ị masịrị ya, ugbu a ọ bụ oge gị ịgbaso ma mụta ọdịnaya enyere, ọ bụrụ na ọ dịrị gị nfe, mgbe ahụ anyị ga -ahapụrụ gị vidiyo nkọwa nke isiokwu jisie ike!
Inicio » Asụsụ » Frances » Ọnwa nke afọ na French